warkii.com » Big News: Deepika oo saxiixaneyso filim ay shaashada jaceyl kula jileyso Shah Rukh Khan!!
Big News: Deepika oo saxiixaneyso filim ay shaashada jaceyl kula jileyso Shah Rukh Khan!!
Atiriishada caanka ah Deepika Padukone ayaa filimo cusub sameyntooda ka aqbaleyso shirkada weyn ee Yash Raj Filims hader waxaana kamid noqon doono filim ay King Khan shaashada kula wadaageyso mudo dheer kadib waana mashruuc xiiso leh iyo war weyn oo maanta soo baxay balse shaaca laga qaadi doono goordhow.
Filimkaan YRFs iska leedahay waxaa la sheegay inuu yahay Action sido kale waxaa director ka noqon doono Siddharth Anand oo sanadkii hore sameeyay filimkii WAR ee Hrithik iyo Tiger ku xarakeeyey hadaba warkaan rasmi ma ahan balse goordhow in la shaaciya la filaa waliba bisha dambe.
Deepika waxay kaloo shirkadaan u saxiixday filim iyada hogaamiye ka tahay oo door awood badan laga siiyay waa aqbaar farxad leh in SRK iyo Deepika kudhoowad 7-sano kadib wada shaqeyaan maadama filimkooda u dambeeyay isla sameyeen uu ahaa Happy New Year (2014) sido kale Om Shanti Om iyo Chennai Express ayee wada sameyeen waana xidigo guusha usaaxiib ah.
Shirkada YRFs qorshaheeda waxuu ahaa inee ku dhawaaqdo filimo cusub oo miisaaniyad weyn xambaarsan iyo jilayaasha waaweyn ee hogaamin doonaan waliba xaflad inee qabato ayee rabtay bishaa balse caabuqa Corona dartiis ayeena u dib dhigtay xitaa waxaa la sheegay munaasabada 50-sano YRFs in lagu beego ayaa larabay filimada ay ku dhawaaqi lahaayen waxaa kamid noqon lahaa filimkaan SRK iyo Deepika.
Dhanka kale wararka waxay sheegen in bisha dambe lagu dhawaqi doono dhamaan filimada waaweyn ee shirkadaan iyo jilayaasha waaweyn ee jili doonaan atoore iyo atiriishabada waan sugi doonaa shirkadaan Superstar-da ay isku keeni doonto sanadkaan hader waaba la hubaa SRK iyo Deepika waxaa kaloo la filaa inee ku dhawaaqi doonaan aflaam ay jilayaan Salman, Hrithik, Akshay, Kareena iyo kuwa kale.